प्रधानमन्त्री ओलीले किन पठाए आफ्ना दूत खुमलटार ? | Safal Khabar
आइतबार, २१ भदौ २०७७, ०९ : ४६
काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष एवंम प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना विशेष दूत अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास खुमलटार पठाएका छन् । ओलीले आफु निकट नेता महासचिव विष्णु पौडेल र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री समेत रहेका स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेललाई हिजो शनिबार बिहान खुमलटार पठाएका हुन् ।
पौडेल र पोखरेल दुई अध्यक्षले गत साउन ३० मा गठन गरेको समस्या समाधान सुझाव कार्यदलका संयोजक र सदस्य पनि हुन् । उनीहरु सहित पम्फा भुषाल, जर्नादन शर्मा, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे रहेको कार्यदल नेकपाले बनाएको थियो । उनीहरुले भदौं ६ मा दुई अध्यक्षलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा १८ भदौंमा सचिवालय बैठकमा नेताहरुले प्रारम्भिक छलफल गरेका थिए । प्रतिवेदनमा वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आलोचनात्मक १५ बुँदे टिप्पणी गरेका थिए । त्यसपछि सचिवालयले सचिवालय बैठकमा प्रतिवेदन माथी उठेका सुझावलाई समेटेर पार्टी र सरकार सञ्चालन सन्र्दभ र स्थायी समिति बैठकको कार्यसूचिमा निर्णय गर्न आवश्यक प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डलाई दिइएको थियो ।
प्रारम्भिक रुपमा राजनीतिक नियुक्ति देखि मन्त्री परिषद् पूर्नगठन, प्रदेश सरकार पूर्नगठन लगायतका विषयमा दुई अध्यक्षका बीचमा अबको छलफलमा ठोस रुपमा प्रस्ताव तयार पार्ने गरी केन्द्रीत हुन्छ । प्रचण्डसँगको छलफलमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा मनोनितका लागि सरकारले कहिले सिफारिस गर्ने भन्नेमा पनि छलफल भएको थियो ।
एक सचिवालय सदस्यका अनुसार, यो भनेको सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन सरकार पूर्नगठन देखि महाधिवशेन सम्मको कार्ययोजना सम्मका विषय समेटिने छन् । यो विषयमा ओलीले मूर्त खाका बनाउन आफ्ना तर्फबाट प्रचण्डसँग छलफल गर्न विवाद समाधानको पहलमा ओलीका तर्फबाट विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै आएका महासचिव पौडेल र पोखरेललाई पठाएका हुन् । प्रारम्भिक रुपमा पौडेल र पोखरेलले प्रचण्डसँग छलफल गरेपछि के के विषय कसरी समेटन सकिन्छ भन्नेमा धारणा बनाउन सहज हुने ठानी ओलीले पौडेल र पोखरेललाई खुमलटार पठाएका हुन् । उनीहरुले अध्यक्ष दाहालसँग कुन कुन विषयमा के कसरी प्रस्ताव तयार पार्ने भन्नेमा केन्द्रीत रहेर छलफल गरेको स्रोतको भनाई छ । प्रचण्डले पार्टीमा देखिएका सबै विषयमा प्याकेज सहमति हुने बताउदै आईरहेका छन् ।
प्रचण्डले भने जस्तो प्याकेज सहमति के के विषयमा कसरी हुन्छन् ? भन्नेमा ओली र दाहालका बीचको छलफललाई सहजीकरण हुने ठानी पौडेल र पोखरेलको दौडधुप बढेको हो । प्रारम्भिक रुपमा राजनीतिक नियुक्ति देखि मन्त्री परिषद् पूर्नगठन, प्रदेश सरकार पूर्नगठन लगायतका विषयमा दुई अध्यक्षका बीचमा अबको छलफलमा ठोस रुपमा प्रस्ताव तयार पार्ने गरी केन्द्रीत हुन्छ । प्रचण्डसँगको छलफलमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा मनोनितका लागि सरकारले कहिले सिफारिस गर्ने भन्नेमा पनि छलफल भएको थियो । प्रचण्डले शुक्रबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौतमको नाम सिफारिस गर्ने अपेक्षा गरेपनि त्यसो हुन सकेको छैन् ।
अब त्यो प्रक्रिया कहिले शुरुवात हुन्छ भन्नेमा पनि पौडेल र पोखरेलसँग प्रचण्डको जिज्ञासा रहेको स्रोतले बताएको छ । प्रचण्डसँगको छलफल पछि पौडेल र पोरखेल दुवै नेता बालुवाटार पुगेर छलफलका बारेमा ओलीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । सोही प्रारम्भिक छलफलका आधारमा सम्भवतः आज दुई अध्यक्षको सम्वाद हुन सक्ने नेकपाका एक नेताले बताए । दुई अध्यक्ष छलफलमा बसेपछि तयार पार्ने समग्र प्याकेज प्रस्तावमा छलफल गर्न स्थायी समिति बैठक बोलाउने र त्यसभित्र छलफल गरी उठेको थप सुझाव समेतलाई समेटेर पून दुई अध्यक्षले नयाँ ठोस प्रस्ताव तयार पार्ने र त्यसलाई सचिवालयमा छलफल गरेर स्थायी समितिमा लगेर पारित गर्ने कार्ययोजना नेकपाको छ । त्यसैको तयारीमा अहिले दुई अध्यक्ष जुटेका छन् ।